Chile: Na eo aza ny fihetsiketsehana mahafaty, dia mbola mitohy ny fihaonana an-tampon'ny APEC 2019
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Chile: Na eo aza ny fihetsiketsehana mahafaty, dia mbola mitohy ny fihaonana an-tampon'ny APEC 2019
Oktobra 26, 2019
Nanambara ny minisitry ny raharaham-bahiny any Chile fa miomana amin'ny hetsika iraisam-pirenena roa lehibe ny firenena amin'ity taona ity, na eo aza ny korontana izay namoizana ain'olona 18 farafahakeliny.
Manohy miomana amin'ny Fihaonamben'ny fiaraha-miasa ara-toekarena Asia-Pacific 2019 (APEC) XNUMX hotanterahina amin'ny volana ho avy, hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Chiliana Teodoro Ribera.
"Manohy manomana ny APEC izahay, na eo aza ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany mba hifehezana ity (korontana) ity mba hahafahana manatanteraka an'io fihaonana an-tampony io," hoy izy.
Nilaza i Ribera fa ny minisiterany tamin'ny alatsinainy dia nifandray tamin'ireo mpikambana 20 hafa ao amin'ny APEC, ary “tsy nahazo fanovana avy tamin'izy ireo izahay mikasika ny fandraisan'anjaran'ireo mpitarika azy ireo.”
Ny bloc APEC "dia tena zava-dehibe amin'i Chili satria ny 70 isan-jaton'ny fanondranana any ivelany dia mitodika any amin'ireo firenena izay an'ny Azia-Pasifika (faritra), ary manodidina ny 7 tapitrisa ny Shiliana miasa mivantana na ankolaka mba hamokarana entana ho an'ireo toekarena ireo," hoy izy.
Ny hetsi-panoherana mitohy dia fanoherana ny halafon'ny vidim-piainana, ary mba hanomezana fahafaham-po ny fitakian'ireo mpanao fihetsiketsehana, "mila ny firenena hitombo hatrany isika, hanondrana hatrany, hanaraka hatrany amin'ny APEC," hoy izy.
Nilaza i Ribera fa miasa ihany koa ny tompon'andraikitra Shiliana amin'ny fikarakarana fivoriana lehibe momba ny fiakaran'ny maripana amin'ny tany, ny fivoriana faha-25 an'ny Fihaonamben'ireo Ankolafy (COP25) mankany amin'ny Fifanarahana momba ny Firafitry ny Firenena Mikambana momba ny Fiovan'ny toetrandro, izay kasaina hatao amin'ny 2-13 desambra.
"Ny fahavononantsika hanampy amin'ny fisorohana ny fiovan'ny toetrandro dia tsy mifamatotra amin'ny fihaonana an-tampony iray, fa fanapahan-kevitry ny governemanta kosa ny hahafahana mampihatra fepetra hanalefahana ny fiovan'ny toetrandro," hoy izy.
Niteraka fihetsiketsehana ny 14 oktobra tamin'ny fiakaran'ny saran-dalan'ny metro. Hatreto dia olona maherin'ny 4,000 no voasambotra.
Tamin'ny 19 oktobra, nanambara ny fanjakana vonjy maika ny filoham-pirenena Shiliana Sebastian Pinera ary nametraka ny tsy fahazoana mivezivezy any amin'ny faritra maro ny ankamaroan'ny firenena.
Nosoniavina ny filoha ny alakamisy teo hanonganana ny fiakarana farany ny tahan'ny herinaratra 9.2 isan-jato. Nilaza ihany koa izy tamin'ity herinandro ity fa hanasonia volavolan-dalàna amin'ny zoma izy hanondrotana 20 isan-jato ny fisotroan-dronono ho an'ny olona efa ho 3 tapitrisa.
Fampitandremana momba ny dia any UK amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina
Noraran'ny Etazonia ny serivisy seranam-piaramanidina Kiobana rehetra